Ny fanomezana tsara indrindra rehetra - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra
Io no fampakaram-bady mahafinaritra indrindra tamin'ny taona ary tsy namela na inona na inona ho an'ny fampakaram-badin'ilay zanany vavimatoany ny fanambadian'ny zanany vavimatoany. Ny olona manan-danja tao an-tanàna dia tao amin'ny lisitry ny vahiny ary ny lisitr'ireo fanomezana dia nalefa ho an'ireo vahiny rehetra niaraka tamin'ny fanasana. Tamin 'ilay andro lehibe dia tonga an-jatony ny vahiny ary nanolotra ny fanomezana. Na izany aza, tsy ny mpanankarena no tsy manan-karena na avy amin'ny fianakaviana manankarena. Na inona na inona ny hoe manan-karena be ilay ray dia nitondra fanomezana manokana manokana ireo vahiny, izay nampiasaina voalohany indrindra hanentana ny rain'ilay ampakarina.
Rehefa nifindra tao amin’ny trano keliny izy mivady, dia nanomboka namongotra ireo fanomezana mba hahitana izay vahiny nanome azy ireo. Na dia kely aza ny toerana tao amin'ny trano fonenany mba hitahirizana ireo fanomezana rehetra, dia nisy fanomezana iray tian'ilay ampakarina hovahana - ny fanomezana an-drainy. Rehefa avy namaky ireo baoritra lehibe rehetra izy, dia tsapany fa tsy nisy na dia iray aza tamin’ireo fanomezana mahafinaritra avy amin-drainy. Anisan’ireo fonosana kely kokoa ny fanomezana iray nofonosina taratasy miloko volontsôkôlà, ary rehefa nosokafany ilay izy, dia hitany fa nisy Baiboly kely mifono hoditra tao. Mivaky toy izao ny ao anatiny: “Ho an’ny zanakavavy malalanay sy ny vinantolahy amin’ny fampakaram-badin’i Neny sy i Dada”. Ireto ambany ireto ny andinin-teny roa avy ao amin’ny Baiboly: Matio 6,31—33 sy Matio 7:9–11.
Tena diso fanantenana ilay ampakarina. Ahoana no nanomezan’ny ray aman-dreniny Baiboly azy? Naharitra taona vitsivitsy nanaraka izany fahadisoam-panantenana izany ary nitohy taorian’ny nahafatesan’ny rainy. Taona vitsivitsy tatỳ aoriana, tamin’ny andro nahafatesany, dia nahita ny Baiboly nomen’ny ray aman-dreniny azy tamin’ny fampakaram-badiny izy, ka naka izany tao amin’ny talantalana nisy azy hatramin’izay. Nosokafany ny pejy voalohany ary namaky toy izao izy: “Ho an’ny zanakavavy malalanay sy ny vinantolahinay amin’ny fampakaram-bady. Avy amin’i Dada sy Neny ». Nanapa-kevitra ny hamaky an’io andinin-teny io izy ao amin’ny Matio 6 ary rehefa nosokafany ny Baiboliny, dia nahita seky iray nisy ny anarany teo amin’ilay izy ary mitentina iray tapitrisa franc Swiss izany. Novakiny avy eo ilay andinin-teny ao amin’ny Baiboly: “Aza manahy momba izany ianareo ka manao hoe: Inona no hohaninay? Inona no hosotroinay? Inona no ho akanjontsika? Mitady izany rehetra izany ny jentilisa. Satria fantatry ny Rainareo any an-danitra fa ilainareo izany rehetra izany. Katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany, dia ho latsaka ho anareo izany rehetra izany.” ( Matio 6:31–33 ). Avy eo dia namadika ilay pejy izy ary namaky izao andininy manaraka izao: “Iza aminareo no mangataka mofo ka manome vato ny zanany? Ary raha angatahany hazandrano, dia omeo bibilava? Raha hianareo, na dia ratsy fanahy aza, dia mahay manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Rainareo Izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy" (Matio 7,9-11). Nanomboka nitomany mafy izy. Ahoana no nahadiso hevitra ny rainy? Tena tiany izy, saingy tsy tsapany fotsiny izany - loza!
Fanomezana be loatra
Afaka herinandro vitsivitsy dia hankalaza Krismasy indray izao tontolo izao. Maro no manahy ny amin’izay fanomezana hovidina ho an’izay mpianakavy. Efa maro no manontany tena hoe inona no fanomezana ho azony amin’ity taona ity. Indrisy anefa fa vitsy ihany no mahafantatra ny fanomezana Krismasy izay efa azony hatry ny ela. Ny antony tsy tian’izy ireo ho fantatra momba ity fanomezana ity dia satria zaza nivalampatra tao am-pandriana ilay izy. Toy ny niheveran’ny mpivady fa tsy misy vidiny ny taratasy volontsôkôlà sy ny Baiboliny, dia be loatra koa ny olona tsy miraharaha ny fanomezana nomen’Andriamanitra antsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Toy izao no famintinan’ny Baiboly azy io: “Misaotra an’Andriamanitra isika noho ny Zanany, fa fanomezana mahatalanjona tsy azo tononina! (2. Korintiana 9,15 Baiboly Fiainana Vaovao).
Na dia manome fanomezana mahafinaritra anao mandritra ny krismasy aza ny ray aman-dreninao, dia nanome ota azy ireo ianao. Eny, ho faty ianao! Alohan'ny hanomezanao tsiny ny ray aman-dreninao amin'izany dia fantaro fa nandray ny ota tamin'ny ray aman-dreniny ny ray aman-dreninao, izay nanaiky azy tamin'ny razambeny ary farany avy amin'i Adama, razamben'ny olombelona.
Na izany aza, misy vaovao tsara - vaovao tsara izany! Ity hafatra ity dia nentin’ny anjely iray 2000 taona lasa izay: “Mitondra vaovao tsara ho an’ny olona rehetra aho! Ny Mpamonjy - eny, Kristy Tompo - dia teraka anio alina tao Betlehema, tanànan'i Davida » (Lioka. 2,11—12 Baiboly Fiainana Vaovao). Ny Filazantsaran’i Matio koa dia mitantara momba ny nofy nananan’i Josefa: «Hiteraka zazalahy izy, ry Maria. Ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny ota rehetra.” (Mat 1,21).
Tsy tokony hanary ny fanomezana sarobidy indrindra ianao. Ao amin’ny fiainan’i Kristy sy ny fahaterahany no manokatra ny lalana ho amin’ny fiaviany fanindroany. Rehefa ho avy indray izy, dia “hofafany ny ranomasonao rehetra, ary tsy hisy fahafatesana sy alahelo sy fitomaniana ary fanaintainana intsony. Fa efa levona mandrakizay izao tontolo izao sy ny loza rehetra eo aminy » (Apokalypsy 21,4)
Amin'ity Krismasy ity, hendre tahaka ny olon-kendry ao Atsinanana hanokatra ny baibolinao ary fantaro ny hafatra manovaova ny fanomezana nomen'Andriamanitra anao. Ekeo io fanomezana io ry Jesoa fa Krismasy! Azonao atao koa ny manolotra an'ity gazety ity ho fanomezana Krismasy ary mety ho lasa manan-danja indrindra amin'ny fanomezana rehetra nomenao hatrizay. Afaka mahafantatra an'i Jesosy Kristy ilay mpandray, satria io fonosana io no harena lehibe indrindra!
by Takalani Musekwa